माओवादी पार्टीका लागि ‘घाँडो’ साबित एउटा बिच्छ्यौना – YesKathmandu.com
माओवादी पार्टीका लागि ‘घाँडो’ साबित एउटा बिच्छ्यौना
माओवादी पार्टीलाई जनमैत्री अस्पतालको ‘गलगाँड’ भिडाउने व्यक्ति रहेछन्, लिटिल एञ्जल्स स्कुलका मालिक तथा कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठ । यो अस्पताल उमेशहरूले जनार्दन शर्माहरूलाई प्रभावमा पारेर कसरी भिडाए ? कथा रमाइलो छ ।
अहिले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा थियो सिद्धार्थ पोलिक्लिनिक । यही पोलिक्लिनिकको सफलतापछाडि सिद्धार्थ गु्रपका सतिश बजाज, नारायण बजाजसहित उमेश श्रेष्ठहरूको लगानीसहित भारतीय चर्चित एपोलो गु्रपको सामुहिक लगानीमाझ सिद्धार्थ अपोलो हस्पिटल खोलियो बालाजुमा ।
तर, कहिले रूपज्योतिले कमिसन खाएर त कहिले दीपक कुँवरहरूले जग्गामै चापचुप पारेर विवाद निस्किएको ग्राण्डी अस्पतालझैं जनमैत्री अस्पताल पनि विवादमा तानियो । विभिन्न सात वटा बैंकको ऋणमा सञ्चालित उक्त अस्पताल एक वर्षमै डुब्ने स्थिति सिर्जना भएसँगै चतुर खेलाडी उमेशले जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’लाई प्रभावमा पारेका रहेछन् ।
त्यहाँका एक जना पुराना लगानीकर्ताले विगत कोट्याउँदै सुनाए, ‘उमेशले उक्त भेटमा प्रभाकरलाई यसरी प्रभावित पारे कि ती लगानीकर्तासमेत छक्क परे ।’ भेटमा उमेशले भनेका रहेछन्, ‘सेनाको आफ्नै अस्पताल हुने,प्रहरीको आफ्नै हुँदा–हुँदा निजामती कर्मचारीको समेत अस्पताल भइसक्यो । तपाईंहरू यत्रो जनयुद्ध लडेर आएको मान्छे, माओवादीकोचाहिँ आफ्नै अस्पताल हुनुपर्दैन ?’यो कुरा प्रचण्ड, बाबुरामको कानमा समेत पुग्यो । र, उनीहरू उमेशको यो योजनाबाट प्रभावित नभइरहन सकेनन् ।
आफ्ना कार्यकर्ताको उपचार हुने, भविष्यमा मेडिकल कलेज खोलेर गतिलै आर्थिकोपार्जनसमेत गर्न सकिने महत्वाकांक्षी योजना सुनेपछि डुबिसकेको जनमैत्री अस्पताल किन्न राजी भए प्रभाकरहरू ।
कसरी जन्मियो जनमैत्री ?
त्यतिबेला बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री, राधेश पन्त बैंकर्स संघको अध्यक्ष थिए । आफ्नै हातमा डाडु–पन्यु भएका बेला माओवादी सरकारले उक्त अस्पतालमा करोडौं खन्यायो । र, सिद्धार्थ एपोलोको नाम रातारात परिवर्तन भई जनमैत्री ट्रष्ट बन्यो । यसरी विभिन्न बैंकको कालोसूचीमा पर्ने डरबाट उमेश मुक्त भए । आफ्नै लागि घाँडो सावित भएको सिद्धार्थ अपोलोको ऋण त्यतिबेलै २७ करोड ९८ लाख पुगिसकेको थियो । यो सबै सकारेर प्रभाकरले अझै ३ करोड रुपैयाँ थपे । उनी त्यतिखेर पिएलए कमान्डर तथा पार्टीको आर्थिक संकलन विभाग प्रमुख थिए ।
एक÷दुई महिना त पूरै चमक–धमकका साथ चल्यो । तर, आफ्नै पार्टी नेताको सिफारिस, कार्यकर्ता, पार्टीकै घाइतेको भीड । शब्दको अगाडि ‘जन’ झुण्ड्याउँदैमा अस्पताल किन चल्थ्यो र ? माओवादीको अस्पताल भन्दै कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत अरू दलका मान्छेले नाक खुम्च्याउन थालेसँगै ६ महिनामै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था भयो । फेरि उमेशले सय शैंयालाई बढाउने, बिपिएच, बिएन, बिएन नर्सिङलगायत चार वटा आकर्षक कार्यक्रम थप्ने प्रस्ताव ल्याए । यसरी नर्सिङहोम कलेज सञ्चालन गरेको खण्डमा राम्रै नाफा कमाउन सकिने उनको योजनाबाट जनार्दनहरू फेरि लोभिए । पुनः एक करोड थपे । टियुमा तत्कालीन एक्टिङ डिन थिए माओवादीकै रतेन्द्र श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा । डाडुपन्यु आफ्नै हातमा भएका बेला कलेज अफ साइन्स भनेर चार वटा कार्यक्रम थपे । कार्यक्रम जनमैत्री अस्पतालको तर सञ्चालन गर्नेचाहिँ उमेश श्रेष्ठको एलए कलेजमा । यसो गर्दा पनि अवस्था फेरिएन ।
अपहरण गरेकैबाट खरिद
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भित्रिएको यो किचलो बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदासम्म कायम रह्यो । माओवादीले यो अस्पताल बेच्न खोज्यो तर प्रभाकरले आफ्नो लगानी परेको हुँदा मानेनन् । प्रचण्डले प्रभाकरलाई हकारेको स्मरण गर्दै ती लगानीकर्ता भन्छन्, ‘तपाईंले मेरो र पार्टीको नामसमेत बद्नाम गर्नुभयो भन्दै यो अस्पताल अन्ततः कुनै समय माओवादीद्वारा अपहररित विराटनगरका आदित्य खनालहरूले खरिद गरे । आदित्यको समूहले यो अस्पताल सञ्चालन गर्दा भारतको अपोलो समूह पुनः लगानी गर्न इच्छुक भयो ।
कुनै समय सुकेको अस्पताल दैनिक पाँच लाख हाराहारीको कारोबार गर्न सफल भयो । तर, मेडिकल कलेज बनाउने शर्तमा अस्पताल किनेको थियो त्यो पूरा नभएपछि समूह बाहिरियो । माओवादीका लागि जनमैत्री अस्पताल यति ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्यो कि उनीहरू कसैलाई टाँसो लगाएर उम्कन चाहन्थे । र, यसबीच अल्का अस्पतालका कुमार थापालाई बेच्न उमेश श्रेष्ठले धेरै प्रयास गरे । उमेशकै निवासमा बसेर धेरै पटक छलफल चल्यो ।
५ करोड रुपैयाँ अग्रिम माग गर्दै उमेशले यो अस्पताल किनिदिन राखेको प्रस्ताव कुमारसम्म पुगेको रहेछ । अल्का अस्पतालका मालिक कुमार थापा भन्छन‘पहिला पैसा हाल अनि डकुमेन्ट दिन्छु भने, जानी–जानी त भीरमा को हामफाल्छ र ?’ ६ महिनादेखि यो अस्पताल बन्द छ । कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । महेन्द्र मञ्जिलको लाइन काटेर काम थाल्ने जनार्दन शर्माकै यो अस्पताल विद्युत् महसुल नतिरेको भन्दै साउनदेखि लाइन काटिएको अवस्थामा छ ।
स्रोत भन्छ, अहिले जनमैत्री अस्पतालको अवस्था यस्तो छ न त कोही किन्न आउँछ, न त बेच्नै सकिन्छ ।
जनमैत्री अस्पताल मात्र नभइ उक्त अस्पताललाई जन्माउने जननी माअाेवादी नै घर न घाटकाे अवस्थामा पुगेकाे छ।जसरी अाज जनमैत्री अस्पताल अलपत्र परेकाे छ त्यसै गरि माअाेवादी नेतृत्व पनि अलपत्र अवस्थामा पुगेकाे छ न त बेइजिङले विश्वास गर्ने न त दिल्लीले काँखी च्याप्ने।
भनेपछी बादर को दाना चेपिएको हो ?
बाबुरामको जस्तो पिएचडी गोरुको सिङमाथि पनि हुन्छः प्रचण्ड
बालक हत्या अमानवीय र क्रुर: आयोग